YEWAND BIALA သည် LUCIE DONLAN အနိုင်ကျင့်ခြင်းတောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်သည် - သတင်း
Yewande က Lucie ကိုသူမနာမည်ကိုအနိုင်ကျင့်ရန်ငြင်းဆိုသည်
Love Island ရှိ Lucie Rose Donlan သည် Yewande Biala အား 2019 တွင်ပြသခဲ့သည်မှာသူမကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။
အဟောင်း Instagram ကိုမှတ်ချက်များအတွက်မနေ့ကတူးဖော် Reddit , Lucie Yewande ပြပွဲအပေါ်သူမ၏အနိုင်ကျင့်။
Instagram အသုံးပြုသူတစ် ဦး က Lucie အား Yewande ကသူမသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောလူတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုမည်သို့ခံစားရသနည်းဟုမေးခဲ့သည်။ Lucie က Yewande ကသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့သည်ဟုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်
သူမသည်သူမရေးသားခဲ့သည်: သူမအမြဲငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်ရဲ့, ငါသူမ၏အမြင်ကိုအကြောင်းကိုနှောင့်အယှက်ဘူး ... သူမသော်လည်းသူကပြောသည်ဘယ်မှာသူမ၏အသွင်အပြင်မကောင်းတဲ့ကြည့်စေသည်။
Yewande ကတော့စွပ်စွဲချက်တွေကိုပြောဆိုပြီးသူမပြောဖို့အရမ်းခက်တဲ့အတွက် Lucie ကသူမရဲ့နာမည်ကိုပြောဖို့ငြင်းဆိုခဲ့တယ်
ပြီးခဲ့သည့်ညကတွစ်တာတွင် Yewande က“ မင်းကိုမင်းကအနိုင်ကျင့်တာလို့ပြောဖို့အရမ်းခက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကငါ့နာမည်ကိုခေါ်ဖို့ငြင်းဆန်တယ်။ !!” အနိုင်ကျင့်🤬
ကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ခေါ်ဖို့ငြင်းဆန်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအသံထွက်ရတာသိပ်ခက်လို့မင်းကိုအနိုင်ကျင့်တာလို့ပြောချင်တယ် !! အနိုင်ကျင့်🤬
- #ENDSARS (@yewande_biala) ဇန်နဝါရီလ 18, 2021
Lucie ကတည်းက Yewande ရဲ့တွစ်တာအပေါ်မှတ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသူမက Yewande ရဲ့နာမကိုအမှီအသံထွက်ရှိခဲ့ကပြောပါတယ်။
စကားပြော MailOnline လူစီက“ ငါဟာ Yewande ရဲ့နာမည်ကိုအသံထွက်ပြောဖို့အခက်အခဲရှိခဲ့တဲ့ပြပွဲမှာပြောခဲ့တယ်။
ငါချစ်မြတ်နိုးတဲ့တစ် ဦး သက်တမ်းအဖြစ်အစားသူမ၏နာမကိုအမှီ၏အတိုကောက်ဗားရှင်းကိုသုံးနိုင်လျှင်ငါမေးသော် - ကဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့ဘာမျှရှိပါတယ်။
သူမက“ ဒီနေ့ခေတ်၊ ကမ္ဘာကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအားလုံးနဲ့အတူငါတို့အားလုံးဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတိုက်ခိုက်ဘဲအတူတကွစုစည်းနေသင့်တယ်။
ငါထင်မြင်ချက်အတိုင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သေခြင်းတရားကိုငါပို့လိုက်ပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ လကပေးပို့ခဲ့တဲ့မှတ်ချက်အနည်းငယ်ကဒီလိုမျိုးနှင်းဖုံးနေပြီးလက်ထဲကထွက်လာပြီးမလိုအပ်သောအဆိုးမြင်အတွေးအခေါ်များကိုတွန်းထုတ်ခဲ့သည်ကိုငါနောင်တရမိသည်။
Amber Gill သည် Yewande ကိုထောက်ခံရန်ကန ဦး စကားပြောဆိုမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး Lucie က Yewande Y ကိုခေါ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်
သူမသည် Tweet လုပ်ခဲ့သည်: Na သူမကဆိုပါတယ်သောအခါငါ '' Y ကို '' သင်တို့ကိုငါမခေါ်နိုင်ငါအရမ်းရယ်ရတယ်မဟုတ်ပါသင်ရုံသင်လဲလှယ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းသောခဲ့ကြသည် '' သူမ၏ '' သင်မခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ ဒါဟာငါ့ကို vim နှင့်အတူရှိ၏။
ညနေခင်းရဲ့နောက်ဆုံးစဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၊ လှပပြီးလေးစားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘုရင်မကြီးဟာဒီအကြောင်းကိုနှစ်နှစ်နီးပါးကြာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည် Yewande ၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်သောကြောင့်လူသိရှင်ကြားပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ villa ရှိစကားပြောဆိုမှုများ၏နေ့ရက်များ၊ အချိန်များ၊ နေရာများကိုမှတ်မိခြင်း။ သင် x ကိုမမြင်ရသ https://t.co/K7IjokOGax
- အေမီဟတ် (@ amyhart1707) 2021 ဇန်နဝါရီလ 19,
မေီဟတ်လည်းသူမ၏သူချင်းကျွန်းသူကျွန်းအတွက်သူမ၏ထောက်ခံမှုဖေါ်ပြခြင်း, Yewande ရဲ့မှတ်ချက်အမှာစကားပြောကြားသည်။ သူမသည် Yewande ၏တွစ်တာကိုပြန်လည်ရေးသားပြီး Yewande ၏ပြောပြချက်ဖြစ်သည့်အတွက်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှပြောကြားခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သူမကဤသို့ပြောကြားခဲ့သည် - ညနေခင်း၏နောက်ဆုံးစဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၊ လှပပြီးလေးစားဖွယ်ကောင်းသောဘုရင်မကြီးသည်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာအောင်ထိုင်နေခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် Y. X ကိုမမြင်ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီဟာက Yewand ရဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်တာကြောင့်လူသိရှင်ကြားမပြောပါဘူး။ tell.I ရဲ့ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ စကားဝိုင်းရဲ့နေရာတွေက x ကိုမတွေ့ရဘူး။
မှတ်ချက်ပေးရန်အတွက် Tab သည် Lucie နှင့် Yewande ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့်ပုံရိပ်ခရက်ဒစ် @lucierosedonlan , @yewande_biala
• ဒီကျွန်းစုထဲကတစ်ယောက်ကတော့ Love Island ကိုသွားဖို့တောင်းဆိုခံရပေမယ့်သူကမငြင်းပါဘူး
ယာ Angus Thong နှင့်ပြီးပြည့်စုံသော snogging
• Love Island မှ Tom သည် ၁၀ နှစ်အရွယ်သူ၏ချစ်သူရည်းစားကိုလက်ထပ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်
• Zara Holland သည်ဘာဘေးဒိုးစ် Covid စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဖောက်ဖျက်သောကြောင့်£ 4.5k ဒဏ်ငွေဖြင့်ရခဲ့သည်